Shiinaha Qaabka cusub ee taangiga isboortiga ragga sarsare Warshad & Warshad | ISAPPARELS
Waxaad ku dari kartaa nashqadeynta qaababkan waxaadna la jaan qaadi kartaa qalabka aad u baahan tahay si aad adigu iskaga dhigto mid ka duwan. 20 + naqshado cusub maalin kasta.Hoping with ISA, waxaad ka dhigi kartaa qaabeyntaada mid dhab ah oo aad ku guuleysataa suuqa; Ku soo dhowow shirkadda 'NC ISA' Warshadaha iyo ganacsiga. Waxaan ku siin doonaa adeegga ugu fiican. Dharkani wuxuu ka samaysan yahay cudbi cudbi ah, taas oo ka dhigaysa inaad dareento raaxo markaad xiraneyso. Naqshadda gadaal sidoo kale waa naqshad I-qaabeysan, oo kuu oggolaaneysa inaad muujiso sawirkaaga si qumman adoo jimicsi sameynaya
Hore: Qaabka cusub ee taangiga ragga
Xiga: Naadiga funaanadda kubbadda koleyga
Jimicsiga Jirdhiska Jirdhiska Jirdhiska Jirdhiska ...
Jimicsiga Vest Murqaha Jidhka ...